August 1, 2021 » Barcelona Oo Rumaysan In Mucjisadii Sannadkii Hore Usoo Baxday Ay Real » Axadle Wararka Maanta
Wada-hadalladii u dhexeeyey Barcelona iyo xiddigeeda da’da yar ee Ilaix Moriba ayaa istaagay, xilli uu laacibkani kusii dhowaanayo dhamaadka qandaraaskiisa, waxaanay taasi keentay, in Barcelona ay ka shakido Real Madrid oo ay dareensan tahay inay sabab u tahay burburka ku yimid wada-hadallada.
Ilaix Moriba oo sida hillaaca uga soo dhex-booday ciyaartoyda da’yarta xilli ciyaareedkii hore, isla markaana bandhig wanaagsan sameeyey ayaa waxa uu heshiiskiisa Barcelona ku egyahay bisha June ee sannadka dambe ee 2022, waxaana arrintani imanaysaa iyadoo aanay soconin wax wada-hadal ah oo u dhexeeya ciyaartoyga iyo kooxdiisa.
Xiddigan yar oo kusoo barbaaray kulliyadda La Masia ayay Barcelona rajaynaysay inay heshiis la gaadhi doonto xagaagan, isla markaana uu cimrigiisa u hibayn doono kooxda, isagoo dhinaca kalena fursadihiisa ciyaareed sugaya, hase yeeshee wax walba way isbeddeleen.
Tababare Ronald Koeman ayaa ku wargeliyey Ilaix Moriba in aanu qayb ka noqon doonin kooxdiisa oo aanu la qaadan doonin tababarka iyo kulamada saaxiibtinimo ee xagaagan ee ay iskugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub maadaama uu diiday inuu heshiis cusub u saxeexo kooxda.
Waxa kale oo uu Koeman u sheegay, in aanu qorshihiisa xilli ciyaareedka qayb ka noqon doonin illaa uu saxeexo heshiis cusub, taas oo ah dagaal ay kooxdu kula jirto ciyaartoygan iyadoo ku qasbaysa inuu qandaraas cusub saxeexo.
Kaddib 18 ciyaarood oo uu saftay xilli ciyaareedkii hore oo uu intooda badan beddel kusoo galay, Moriba ayaa muujiyey tayo sarraysa iyo ciyaar heersare ahayd.
Si kastaba, Barcelona oo sannadkii 2019 heshiis cusub oo saddex sannadood ah ka saxeexday Moriba oo uu ku qaadanayay mushahar gaadhayay 1 milyan oo Euro sannadkii, kana dhigaysay da’yarkii ugu mushaharka badnaa abid, ayaa waxay kooxdiisu rumaysan tahay in Real Madrid ay ka dambayso hakadka ku yimid wada-hadallada, qorshaha Florentino Perez na yahay in xagaaga dambe ay si bilaash ah kula wareegaan Ilaix Moriba.